Courses – BurmeseHearts
The Basics Of QoS – Network Computing
Tutorials in Burmese by Sai Linn Thu from RHC Technologies
Spanning Tree Protocol (STP) Tutorials
CISCO ACI – Tutorials in Burmese by Sai Linn Thu from RHC Technologies
F5 Networks – Tutorials in Burmese
F5 Networks – Tutorials in Burmese – Tutorials in Burmese by Sai Linn Thu from RHC Technologies
Multiprotocol Label Switching ( MPLS) – Tutorials in Burmese
Multiprotocol Label Switching ( MPLS) – Tutorials in Burmese by Sai Linn Thu from RHC Technologies
Python for Network Engineers – Tutorials in Burmese
Python for Network Engineers – Tutorials in Burmese by Sai Linn Thu from RHC Technologies
Make-up and sewing course – BurmesHearts Edtech Conference 2016
BurmeseHearts Edtech Conference 2016 11 Dec – Taw Win Garden Hotel , Yangon, Myanmar 500+ Attendees5Education Leaders3Skill based Workshops
Swe Zin Htaik – BurmesHearts Edtech Conference 2016
Lynn Thaik Nyunt – BurmesHearts Edtech Conference 2016
Tin Moe Lwin – BurmesHearts Edtech Conference 2016
Yatu – BurmesHearts Edtech Conference 2016
Paid Course in Yangon
Basic Computer Skill – ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနည်း
Free Online Course to Learn some basic computer skills.
Paid Online Course from BurmeseHearts.com
English Grammar – Beginner
To start this course please Click on red button [ register ]
Applied English ( Level – 1 ) – A to I (9Lessons)
27 hours of lessons
iOS Developer Course (Advanced Course)
Paid Course in Yangon –
Apple ၏နောက်ဆုံး ထွက် iOS9မှာ မိမိနှစ်သက်ရာ Application တွေကို Swift Language အသုံးပြု ပြီးအလွယ်တကူရေးသားဖန်တီး နုိုင်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
iOS Developer ( Foundation Course)
ISP Routing Workshop in Yangon
ISP Routing5days Workshop in Yangon
MikroTik RouterOS Online Training Class
MikroTik ဆိုတာဘာလဲ။MikroTik RouterOS ဆိုတာဘာလဲ။MikroTik Training and Certifications တွေကိုဘယ်လို ဖြေလို့ရလဲ။
Credit to Phyo Phyo Hein from i-BEAM
Excel 2013 – Basic ( English)
An introductory course on using Microsoft Excel 2013
U Ko Ko Htwe ( Chairman of Taw Win Family Co Ltd ) – Sharing experience
Myanmar English Learning & Training
Professional Android Development Course (PADC)
Paid Course in Yangon – Training Center
Starting date : 2016/10/03 (Mon)
Starting hours : 09:00 am – 2:30 pm (Mon – Fri)
Course fees : 248,000 Ks
Starting date : 2016/10/15 (Sat)
Starting hours : 09:00 am – 02:30 pm (only Sat)
Course fees : 178 000 Ks
Practical Advanced Java(PAJ)
Starting date : 2016/08/01 (Mon)
Starting hours : 09:00 am – 02:30 pm (Mon – Fri)
Course fees : 218,000 Ks
In this course, we will discuss ADB (Android Debug Bridge)
Practical Android Java Development
Discover intermediate to advanced C++ syntax
This MySQL for Beginners training is your first step in mastering MySQL, the world’s most popular open source database
Developer Conference – (DevCon) YANGON 2015 – နည်းပညာ သင်ကြားခြင်းဆုိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ
Tech in Asia CONFERENCE 2016 – Singapore
Learn the basics of jQuery
Learn how to make your websites interactive and create animations by using jQuery
Java Course Intermediate
Learn to program in the Java programming language. This course assumes basic java programming knowledge
Connecting you to Asia’s Startup Ecosystem – E27
To get free conference tickets
11 Dec 2016 – Yangon – Taw Win Garden Hotel
Burmese Hearts Edtech Conference 2016
Learn basic Java programming by developingasimple mobile game that you can … This course will help you to understand how programs work
This course will get you started with HTML5 game development.
Study in Singapore full-time for 12 months
Got questions? Viber us at +959 971 077 358 (Viber)
EMAIL US AT LEARN@BURMESEHEARTS.COM
Computer Networking course that delves into the latest concepts and tools used by the CN industry
Study in Singapore full-time for6months
Study in Singapore full-time for 16 months
Web Design အခြေခံ
C programming အခြေခံသင်ခန်းစာ
This course will teach you how to program in C, the programming language, from the ground up.
C++ Console Game Development သင်ခန်းစာ
PHP Membership System သင်ခန်းစာ
This Course will teach you how to buildaMembership Site with PHP
Step By Step Java Development သင်ခန်းစာ
Learn how to program using the worlds most popular programming language, Java
Android Development သင်ခန်းစာ – Building your first App
This class teaches you how to build your first Android app. You’ll learn how to create an Android project and runadebuggable version of the app.
HTML5 & CSS3 Special Course
This course will teach you everything you will need to know about HTML5 and CSS3 and what it will take to start your own website development
WordPress သင်ခန်းစာများ – Website ဖန်တီးခြင်း
Learn easy Wordpress Development in this course
မြန်မာတွေအတွက် ထိုင်းဘာသာစကား – Thai language course for Burmese
To start this course register သင်ခန်းစာစသင်ယူဖို့register လုပ်မယ် Click on red button အနီရောင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်မယ်
Master your skills with Learning Autodesk Revit MEP
Everyday Makeup | Summer Makeup Routine | Makeup & Outfits for Glasses | Japanese Skincare + Makeup Routine | Arabic Cut Crease Eye Makeup Tutorial
You too can learn to apply make up correctly by enrolling foramake up course
C# programming language for Myanmar
Your job is to LEARN THE CODE and that’s what this online C# course is all about.
Video Editing – How to use basic PowerDirector
A complete, step-by-step video editing course covering all the basics
This is an introductory course on computer networking, specifically the Internet. It focuses on explaining how the Internet works
Microsoft Office Word အခြေခံအသုံးပြုနည်း(အပိုင်း၁)
Get Microsoft Office training and gain the skills needed to express your ideas, solve problems, and connect with people
Develop your digital communication skills by using drafting and editing commands in Autodesk AutoCAD, the industry-standard
Photoshop – Basic Rendering
In this course you will learn Basic Rendering in Photoshop
Solidworks (2014 ) အား မိတ်ဆက်ခြင်း
Learn Basic principles of Solidworks
English – Spoken Patterns
တစ်လအရွယ်မှသည် တစ်နှစ်အရွယ်အထိ ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်
ယခုသင်ခန်းစာဟာ ကလေးမိဘများနှင့် ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူများ သိကောင်းဖွယ် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်သာယာသော အိမ်ထောင်ရေး ထူထောင်လိုသူများအတွက်
ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ပွင့်လင်းမှု ၊ ရိုးသားမှု ၊ နားလည်မှုတွေ အခြေခံထားရမယ့်အပြင် ဘဝတိုက်ပွဲကို ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအဖြစ် တသက်တာ အတူလက်တွဲသွားနိုင်ဖို့ အချက်များစွာ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဤသင်ခန်းစာအား လေ့လာပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်လိုသူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
မွေးကင်းစကလေး ပြုစုပုံနှင့် ကျန်းမာရေး သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
မွေးကင်းစကလေး အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ကလေးမိဘများအတွက် မွေးကင်းစကလေး ပြုစုပုံနှင့် ကျန်းမာရေး သိမှတ်ဖွယ်ရာများအား တစုတဝေးတည်း လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
မီးနေသည် ၊ နို့တိုက်မိခင်နှင့် မွေးကင်းစကလေး၏မိဘများ မှတ်သားဖွယ်
ကလေးမီးဖွားပြီးစ မိခင်၏ မီးတွင်းမှမီးနေသည် လိုအပ်များမှသည် ကလေးနို့တိုက်မိခင်၏ အစာအာဟာရနှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ဖော်ပြပေးထားသည်။
ရာသီသွေးမပေါ်လို့ ပဋိသန္ဓေ စတည်သည်မှ ကလေးမွေးဖွားသည်အထိ အဆင့်ဆင့် ရှင်းလင်းပြထားသဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူတိုင်း ၊ အိမ်ထောင်သည်တိုင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ မိခင်လောင်းတိုင်း လေ့လာသင့်သည့် သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် လိင်သဘာဝ မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ
သူငယ်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ၏ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှ သင်ခန်းစာများကို လက်တွေ့ပြင်ပ၌ မှတ်မိသိရှိ အသုံးချနိုင်စေရန် အကြောင်းအရာဆက်စပ်ပြီး သင်ကြားပို့ချထားသဖြင့် ကလေးများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။
English Grammar အား တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ် သိရှိသွားရန် သင်ကြားပို့ချထားသဖြင့် အခြေခံကျောင်းပညာရေးအဆင့်မှသည် English Grammar အား လေ့လာလိုသူ မည်သူမဆို လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်သည်။
GIMP – photo retouching, image composition and image authoring
ကလေးများအတွက် အခြေခံ လိင်ပညာပေး
Learn how to use Paint
Excel အား မိတ်ဆက်ခြင်း
Excel တွင် Cell များ ဖတ်ခြင်း
Excel တွင် View Bar ကို အသုံးပြုခြင်း
Excel တွင် Copy ၊ Cut လုပ်၍ ပြန်ခေါ်ခြင်း
The free typing video lessons supply the complete “How to type” package
အရွယ်ရောက်လာရင် သူ့အရွယ်အလိုက် သွေးသားပြောင်းလဲမှု ၊ စိတ်ကစားမှု ၊ စူးစမ်းလိုမှု ၊ စမ်းသပ်လိုမှု ၊ ခံစားနားလည်လိုမှု ၊ အိမ်ထောင်သည် ဘာသာဘဝ တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတွေ သိသင့်တဲ့ကိစ္စကို ဆောင်သင့်တာဆောင်ရအောင် ၊ ရှောင်သင့်တာရှောင်နိုင်အောင် ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
ဘယ် ၊ ညာ ၊ left & right လေ့လာခြင်း – အပေါ်အောက် up & down လေ့လာခြင်း
The seminar is organized by the Stanford HCI Group, which works across disciplines to understand the intersection between humans and computers.
Quantum Entanglements: Part3(Spring 2007)
This Stanford Continuing Studies course is the third ofathree-quarter sequence of classes exploring the “quantum entanglements” in modern theoretical physics. Leonard Susskind is the Felix Bloch Professor of Physics at Stanford University.
မူလတန်းကြို ဂဏန်းသင်္ချာ လေ့လာခြင်း
IT – TIPS & TRICKS
ပုံစံနှင့် အရောင်များ လေ့လာခြင်း
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအား သိရှိထားခဲ့သော မြန်မာအက္ခရာ ငမှစ၍ ဆက်စပ်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်၍ ကလေးငယ်များအား အလွယ်တကူ မှတ်မိစေမည်ဖြစ်သည်။
This Stanford Continuing Studies course is the second ofasix-quarter sequence of classes exploring the essential theoretical foundations of modern physics.
မြန်မာအက္ခရာ ဂ မှ စတင်၍ ဆက်စပ်သင်ကြားရင်း မြန်မာအက္ခရာများအား ခပ်လွယ်လွယ် မှတ်မိသိရှိသွားစေမည်။